Quercetin Dihydrate Price, Alaab -qeybiye ka socda Bolise
[CAS MAYA. ] 6151-25-3
[Formula Molecular] C15H10O7 2H2O
[Miisaanka Molecular] 338.2
1. Ciribtirka xaakada iyo qufaca oo kaa yareeya
2. Dufanka hoose iyo cadaadiska dhiigga
3. Kordhi xasaanadda xididdada dhiigga
Ku saabsan Quercetin Dihydrate
Quercetin Dihydrate waa flavonoid si ballaaran loogu qaybiyey dabeecadda. Magaca waxaa la isticmaalay ilaa 1857, waxaana laga soo qaatay quercetum (kaynta geedkii), kadib Quercus. Waa dabiici si dabiici ah u ah ka-hortagga gaadiidka auxin polar. Quercetin Dihydrate waa qaabka aglycone ee tiro ka mid ah glycosides kale ee flavonoid, sida rutin iyo quercitrin, miro citrus foundin, buckwheat iyo basasha. Quercetin Dihydrate wuxuu sameeyaa glycosides quercitrin iyo rutin oo ay weheliyaan rhamnose iyo rutinose, siday u kala horreeyaan.